Hevitra MPANOHARIANA | Martsa 2018
2018-03-24 @ 20:53 in Ankapobeny
Avy nanatrika ny fivorian'ireo bilaogera maromaro aho androany asabotsy 24 marsa 2018 no andeha hody, efa maizina ny andro saingy mbola be olona eny an-dalana. Tao amin'ny toeram-pisakafoanana iray teo Ambohijatovo no nanaovana izany fivoriana izany, ary mba nahatratra 20 ny isan'ny nanatrika. Anisan'ny betsaka izany raha oharina tamin'ny fivoriana efa natrehiko hatramin'izay. Tsy dia any loatra anefa no tena tiako hosoratana fa ny tranga iray hitako teny an-dalana hody no nahavariana ka hotantaraina kely.
Efa maizina ny andro, be ny mpivezivezy eny an-dalana amin'iny Ampasapito eo amin'ny rond-point iny ary mitohana ihany koa ny fifamoivoizan'ny fiara. Somary 50 metatra mizotra ho any amin'ny gare routière iny anefa dia nisy tangoron'olona be dia be, ary nisy polisy maromaro koa teo tamin'izany. Vinaniana fa nisy mpanendaka tratra teo amin'io toerana io, sady fiantsonan'ny fiara fitaterana ihany koa ilay izy. Afaka 50-100 metatra miala eo indray dia misy zatovolahy iray ety ivelany midaroka mpamily taxi ao anatin'ny fiara 4L. Misesisesy ny totohondry nataon'ilay tovolahy, heveriko avy hatrany fa mpanendaka naman'ilay tratra nolazaiko teo io mitifitra tsy ankitsahatra mpamily taxi io.
Mitohana ny fifamoivoizana, tsy afaka nandositra ilay taxi, mitohy hatrany ny daroka ataon'ilay zatovolahy. Tsoriko fa raha azoko natao dia nadonako tamin'io tovolahy io no moto-ko no mandositra aho avy eo satria efa misy tovolahy maromaro koa hanenjika ilay taxi, ary saika nataoko izany ho fiarovako ilay mpamily taxi. Fa tsy afaka nisongona ireo fiara teo alohako mihitsy aho noho ny hateren'ny lalana azo isongonana (fantatsika anefa fa midadasika mihitsy iny arabe avy eo amin'ny rond-point mankany Ampasapito iny). Efa saika hivadika taty amin'ny toerana anilan'ilay mpamily hanao ny fanendahana mihitsy ilay tovolahy no afa-nitsoriaka tampoka ilay taxi ka nandositra.
Ny zavatra azo marihana dia ny olon-dratsy indray eto amin'ny tanàna no manana firaisankina fa ny hafa kosa tsy mba afa-mifanavotra. Efa mifankafantatra angamba ry zareo ary lazaiko anareo fa misy hatramin'ny 10 taona monja ireo tovolahy manao andiany handeha hamely ilay mpamily taxi io. Maninona re no dia avelantsika hanjaka toy izao ny ratsy? Dia hiaritra izay ataony fotsiny ve izany isika? Manjombona tanteraka ny hoavy raha betsaka amintsika no tsy manao izay tokony ho adidy ho firaisankina hanoherana ireo olon-dratsy ireo.